Otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Samsung Galaxy S6 Edge / S5 / S4 / Cheta 4
Nyefee na Ndi ana-akpo si Nokia ka Samsung Galaxy S6 Edge / S6 / S5 / S4 / S3
Nwere ihe ochie Nokia ekwentị, dị ka Nokia 2720a-z, ruo ogologo oge, ma ugbu a ịzụta a ohuru Samsung ngwaọrụ, ihe atụ, Galaxy S6 Edge? O di nwute na, gị niile kọntaktị na-tọrọ atọ na gị ochie Nokia ekwentị. Ị nwere nyefee kọntaktị site Nokia ka Samsung Galaxy S, otú i nwere ike ịkọrọ gị ọhụrụ ekwentị na ndị enyi gị. Ke ibuotikọ emi, m nwere ike ikwu na ị na abụọ ngwọta dị mfe na-eme ka ya.
Method 1. Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Samsung Galaxy S6 Edge / S6 / S5 / S4 / S3 na MobileTrans
Method 2. Olee nyefee Data si Samsung ka Samsung na Samsung Smart Gbanye
Method 1. Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Galaxy S6 Edge / S6 / S5 / S4 / S3 na MobileTrans
Nyefee kọntaktị site Nokia ka Samsung Galaxy mfe!
Nyefee na kọntaktị site Nokia ka Samsung Galaxy S / Rịba ama na keukwu na Ama kọntaktị.
E wezụga kọntaktị, ọ mbipụta SMS, music, foto na music si Nokia ka Samsung Galaxy.
Dakọtara na Samsung S6 Edge, S6, S5, S4, S3, Cheta 4, Cheta 3 na ndị ọzọ na Nokia Symbian igwe.
Nke mbụ niile, download na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa gị. Mgbe ahụ ị ga-ahụ isi window nke usoro ihe omume dị ka ndị a. Iji nyefee data si Nokia ka Samsung Galaxy S ma ọ bụ Cheta, i kwesịrị ịhọrọ nhọrọ nke "na ekwentị ekwentị Nyefee" na n'aka ekpe. Mgbe na-eji eriri USB jikọọ gị Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba na kọmputa.
Nzọụkwụ 2. Họrọ data ị chọrọ nyefee si Nokia ka Samsung Galaxy S 6 Edge / S6 / S5 / S4 / S3
Mgbe gị ntị na-ahụrụ site na kọmputa, ị ga-ahụ ndị na-esonụ window. Ị nwere ike iji "tụgharịa" button melite isi iyi na ebe ngwaọrụ. Jide n'aka na Nokia ekwentị bụ isi iyi otu (na ekpe). Mgbe ahụ ị pụrụ selectively họrọ faịlụ ụdị na ị chọrọ nyefee si Nokia ka Samsung. Dị nnọọ ego igbe n'ihu faịlụ ụdị.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị Nokia ngwaọrụ dabeere na Windows usoro, biko ndabere gị kọntaktị na OneDrive mbụ, wee pịa Weghachi si ndabere na Mobiletrans iji weghachi kwadoo kọntaktị na Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Copy Photos, Music, Video, Ndi ana-akpo na SMS si Nokia ka Android Ngwaọrụ
Site ndabara, niile data i nwere ike nyefee na-ticked. I nwekwara ike wepụ akara tupu ọdịnaya ọ bụla ị na-adịghị amasị nyefee. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihichapu niile data na Nokia ekwentị, ị pụrụ ime ya ọnụ site ịlele "Clear data tupu oyiri". Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy". A dialog abịa si, na-agwa gị pasent nke ọganihu mmanya. Nọgidenụ na-ma ngwaọrụ ejikọrọ ruo mgbe nyefe okokụre.
Method 2. Nyefee Nokia Ndi ana-akpo ka Galaxy S6 Edge / S6 / S5 / S4 / S3 site Iji Samsung Smart Gbanye
Samsung Smart Gbanye na-akpan mere site Samsung ụlọ ọrụ, na-eji nyefee data si iPhone, Nokia ekwentị, Blackberry ekwentị na Android ekwentị Samsung Galaxy ngwaọrụ. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị kwadoo gị ochie Nokia ekwentị na Nokia PC Suite, i nwere ike iji Samsung Smart Gbanwee na wepụ nkwado ndabere na mpaghara transfer data gị Galaxy S3 / S5 / S4 / Cheta 4.
Nzọụkwụ 1. ndabere kọntaktị na gị Old Nokia ekwentị
Download Nokia PC Suite na wụnye na kọmputa. Jikọọ ekwentị Nokia gị na kọmputa site na eriri USB, Bluetooth na Infrared. Mgbe ejikọrọ, na-eji Nokia PC Suite nkwado ndabere na mpaghara kọntaktsị na ekwentị Nokia gị. E wezụga kọntaktị, ị nwekwara ike ndabere kalenda, na ndetu, ibe edokọbara, ederede ozi, ntọala na ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Download na-agba ọsọ Samsung Smart Gbanye
Gaa Samsung ukara website na ibudata Samsung Smart Gbanye. Ị adịghị mkpa iji wụnye ya. Dị nnọọ na-agba ya na jikọọ na gị Samsung Galaxy ngwaọrụ, dị ka Samsung S3 / S5 / S4 / Cheta 4, na kọmputa na iji eriri USB.
Nzọụkwụ 3. Copy Nokia Ndi ana-akpo ka Galaxy S3 / S4 / S5 / Cheta 4
Ke akpan window, họrọ Nokia na pịa Next. All data na Nokia ndabere a ga-emere. Tinye akà rà na kọntaktị na pịa Go na Malite nyefee Nokia kọntaktị gị Samsung Galaxy ngwaọrụ.
Ọzọ Isiokwu banyere Nokia na akporo ekwentị Data Nyefee
Otú nyefee ọdịnaya site Nokia ka iPhone
Otú nyefee faịlụ site Nokia ka Samsung
Olee otú Gbanwee Data si iPhone ka Android
Otú nyefee Data si gam akporo ka iPhone
Olee otú Bugharịa Files si gam akporo ka Android
Otú nyefee Data si Samsung ka iPhone
Olee otú Play Flash on Samsung Smartphones
Samsung Cheta SMS Iweghachite: Olee naghachi Ozi si Samsung Galaxy Cheta
> Resource> Samsung> Nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Samsung Galaxy S3